HG Wells. Ukukhumbula umbhali wenyani wesayensi | Uncwadi lwangoku
HG Wells. Ukukhumbula umbhali weentsomi zesiNgesi
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | into engeyonyani yebuchwepheshe, Ababhali, I fantasy, Inoveli
Ifoto ka-HG Wells ngu-George Charles Beresford.
UHerbert George Wells Usweleke ngo-Agasti 13, 1946 eLondon. ndibene 79 iminyaka kwaye wayengumbhali-mbali, isithandi sobulumko, kwaye kusenokwenzeka ukuba wayengumbhali weNgesi odumileyo iinoveli zenzululwazi, umanduleli wohlobo. Sonke siyifundile eminye yemisebenzi yakhe kwaye ukuba akunjalo, siyibonile kungenakubalwa ukulungelelaniswa kwefilimu ezenziweyo kule minyaka idlulileyo.
Namhlanje ndiyakhumbula le klasiki yohlobo oluthile kunye nezinye amabinzana avela kwinoveli zakhe ezi-4 eyaziwa kakhulu: Umatshini wexesha, iMfazwe yeHlabathi, Isiqithi sikaGqirha Moreau y Umntu ongabonakaliyo. Ndiphinda ndiqwalasele olo hlengahlengiso lwefilimu.
1.1 Ixesha loMatshini
1.2 Imfazwe yeHlabathi
1.3 Isiqithi sikaGqirha Moreau
1.4 Umntu ongabonakaliyo
2 Yeyiphi yokugcina?
Uzalelwe ngaphakathi BromleyKwiKent County, wayengumntwana wesithathu wosapho olukumgangatho ophantsi olwalukhathalele ukuba banemfundo elungileyo.
Xa a ngengozi Uye wamnyanzela ukuba alale ebhedini okwexeshana, uthathe ithuba lokufunda kakhulu, nto leyo ibangele ukuba afune ukubhala. Emva koko wenza isivumelwano isifo sofuba yaye wazinikela ngokupheleleyo ekubhaleni. Wayesebenza kakhulu kwaye wonke umsebenzi wakhe wawuchatshazelwa kukunzulu kwakhe ukugwetywa kwezopolitiko.
Wayikhuthaza loo nto isayensi kunye nemfundo baya kuba ziintsika ezimbini ezisisiseko kuluntu lwekamva apho umntu aya kuthi athabathele phezulu.
En 1895 esidlangalaleni Ixesha loMatshini, Kuqala njengothotho kwaye kamva njengencwadi kunye nayo mpu melelo kwangoko. Ukusuka apho wabakhonkxa ngamatyathanga. Kwakuloo nyaka wapapasha Undwendwelo oluhle, kwaye kule minyaka mithathu ilandelayo iinoveli ezintathu ezonyuse udumo lwakhe: Isiqithi sikaGqirha Moreau, Indoda engabonakaliyo y Imfazwe yeHlabathi.
Umthetho wendalo esiwulibeleyo kukuba ubuchwephesha bengqondo yimbuyekezo yenguqu, ingozi kunye nokungazinzi ... Indalo ayinakuze ibhenele kubukrelekrele de umkhwa nethuku lungenamsebenzi. Akukho bulumko apho kungekho tshintsho kwaye kungekho mfuneko yenguqu. Zizilwanyana ezinobukrelekrele kuphela ekufuneka zikwazi ukumelana neemfuno ezahlukeneyo kunye neengozi.
Amandla sisiphumo sentswelo; ukhuseleko luseka ibhaso ngobuthathaka.
Mhlawumbi ufunda ukusebenzisa umatshini wobuganga, ukuhamba kwangoko ukuya kumda wobomi kwangoko, ukufunyanwa amaxesha ngamaxesha kwiparadesi emfutshane engenalo ikamva okanye elidlulileyo, ngaphandle kokukhohliswa okuphindiweyo koloyiko kunye noloyiko.
Awungekhe uhambe nangayiphi na indlela ngexesha, ngekhe ubaleke umzuzu wangoku.
Ngokunokwenzeka ulungelelwaniso lwefilimu oludumileyo kweli bali (kunye nelithandayo) lelona libalaseleyo URod Taylor en 1960 kwaye iphumelele u-Oscar ngezona ziphumo zibalaseleyo. Eyokugqibela yayiqala ngo-2002 kwaye inkwenkwezi uGuy Pierce noJeremy Irons.
Ngexesha lasemini sixakeke kakhulu yimicimbi yethu emibi kangangokuba kubonakala ngathi akunakwenzeka kuthi ukuba umntu othile phaya phezulu abukele amanyathelo ethu kwaye, ngokusebenza nzima nangokwendlela, acwangcise ukoyisa umhlaba. Ubusuku kuphela obunako, kunye nobumnyama kunye nokuthula, ukudala iimeko ukuze iiMartian, amaSelnites kunye nezinye izinto ezihlala kwindalo iphela, zibenendawo kwindawo yethu yokucinga.
Ngaba ilunge ngantoni inkolo ukuba ayisekho xa kukho iintlekele?
Kude kube lelo xesha andiqondi ukuba ndikhona ndingenakuzinceda kwaye ndindedwa. Ngequbuliso, ngathi yinto ewayo kum, uloyiko lwandibamba.
Kungenzeka ukuba uhlaselo lweMartian, ekugqibeleni, lube lulutho kuthi; ubuncinci, isihluthe ukuzithemba okuzinzileyo kwikamva, owona mthombo uqinisekileyo wobubi.
Into emayithethwe ngabantu abaziwayo usasazo lukanomathotholo Kwenzekani Orson Welles yale noveli ngo-Okthobha u-30, 1938? Yayingu uhlengahlengiso kumabala emidlalo, yeyure ebaliwe ifom yeendaba umzuzu wokugqibela. Yangena kubaphulaphuli kangangokuba wonke umntu wayekholelwa ngokwenyani olo hlaselo lwasemzini. Ihleli njengomzuzu kanomathotholo njengembali njengoko ingenakuphindwa. Kwaye uhlengahlengiso lwefilimu alukwazanga ukohlula.
Eyona yakudala, Apho waphumelela Oscar ukuba iziphumo ezibonwayo, ukusuka 1953. Yaye omnye oluninzi lwangoku ngulowo Ifaka Tom Cruise kwi2005.
Isiqithi sikaGqirha Moreau
Isilwanyana sinokuba noburharha kwaye sibe namaqhinga ngokwaneleyo, kodwa kuthatha indoda yokwenyani ukuba ixoke.
Andizange ndive ngento engenamsebenzi, ethi, kungekudala okanye kamva, indaleko ingagxothwanga kubukho. Kwaye wena? Kwaye intlungu ayimfuneko.
Izilwanyana zinokuba nobuqili kunye noburhalarhume, kodwa yindoda kuphela ekwaziyo ukuxoka.
Inyaniso yokuba ezi zidalwa zazingelilo nje izilo ezikhohlakeleyo, zizinto nje ezoyikisayo zoluntu, zandenza ndangakhululeki malunga nokuba ziya kuba nako ntoni, zimbi kakhulu kunoloyiko oluthile.
Ndishiyeke neklasikhi ukusuka kuma-70s ababedlala kuyo Burt Lancaster kunye noMichael York Ngo-1977. Kodwa kukwakho naleyo yenziwa phantse kwiminyaka engama-20 kamva UMarlon Brando kunye noVal Kilmer.
Izimvo ezinkulu nezingaqhelekanga ezidlulayo kumava zihlala zinefuthe elincinci emadodeni nakwabafazi kunamanani amancinci, abonakalayo.
Onke amadoda, nkqu nawona afunde kakhulu, anento ethile ewakholisayo.
Mna ndedwa, iyamangalisa indlela encinci umntu anokuyenza yedwa! Ubiwe kancinci, wenze umonakalo omncinci, kwaye iphelela apho.
Ndiyindoda eyomeleleyo kwaye ndinamandla; Ngaphandle koko, andibonakali. Akukho mathandabuzo ukuba angababulala bobabini kwaye abaleke ngokulula, ukuba uyafuna. Bayavuma?
Kwaye koku ndikuthatha enkulu Imvula kaClaude obenze ubuso nomzimba babonakala kumlinganiswa ophambili kwiklasikhi ye 1933. Kodwa kukwakho neembeko kunye nokwahluka kwezihloko ezinje Indoda engenasithunzinge UKevin Bacon kunyaka 2000. Kwaye ngakumbi, uthotho lwamashumi asixhenxe Ukususela ebuntwaneni bam apho ndinothando olukhulu ngendlela endandiyithanda ngayo UBen murphy, ophambili kuyo.
Ukukhetha okunzima. Ke eyona nto intle ukuyenza kukufunda (okanye ukubukela) nawaphi na amabali e-Wells.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » into engeyonyani yebuchwepheshe » HG Wells. Ukukhumbula umbhali weentsomi zesiNgesi
Eyona ncwadi ingcono yesaga